Wararkii ugu dambeeyay horyaalka - BBC Somali - Cayaaraha
Wararkii ugu dambeeyay horyaalka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Mey, 2013, 19:06 GMT 22:06 SGA
Laacibka Gareth Bale ee Tottenham
Waxaa heer gebagebo ah maraya tartanka horyaalka kubbadda cagta ee dalka Ingiriiska iyadoo Manchester United sanadkan goor hore ku guulaysatay koobka inta aan la gaarin dhammaadka ciyaaraha.
Hase ahaatee waxaa galabta barbar dhac la kulantay kooxda Manchester City oo kaalinta 2aad ku jirta laakiin aan hadda laga yaabin inay taasi waxyeello u geysato kaalinteeda.
Kulammada xiisaha gaarka leh ee galabta dhacay waxaa ka mid ah ciyaar dhexmartay kooxaha Tottenham oo kaalinta 4aad u tartamaysa iyo Southampton oo meel dhexe joogta hase ahaatee la degi gaartay Tottenham oo dhowr jeer ay ku qaadday weerarro oo gool iyo ka badanba ay ku dhalin kareen.
Natiijadii waxay noqotay 1-0 ay ku adkaatay Tottenham kaddib markii Gareth Bale oo darbad xoog leh meel fog ka dhaliyay.
Ciyaarta kale ee galabta isha lagu hayay waxay dhexmartay Arsenal oo ka cabsi qabtay in kooxda QPR ay u qoonsato kaalinta 4aad ama 3aad ee ay u tartamayso maadaama QPR ay ka mid tahay kooxaha sanadkan horyaalka ka soo haray ee hoos u dallacay, hase yeeshee waxay ciyaartaasi ku dhammaatay Arsenal oo 1-0 dirqi ah ku dhaaftay QPR sidaasna hadda ku taagan kaalinta 4aad.
Fulham 2- 4 Reading
Norwich 1- 2 Aston Villa